7. Love Actually….Sucks!
၂၀၁၁ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဟောင်ကောင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Scud (Danny Cheng Wan-Cheung) က ရိုက်ကူးထားပြီး ဒီဇာတ်ကား ခေါင်းစဉ်အရ အချစ်ဇာတ်ကားဆိုတာ သိသာပေမယ့် ပုံမှန်ထက် ချစ်တင်းနှောခန်းတွေက ပိုများနေပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ အသေးစား အထ္ထုပတ္တိ ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ပြီး အီတလီ မင်းသမီးနဲ့ ဒါရိုက်တာ Asia Argento အကြောင်းပါ ။ သူမရဲ. ဘဝကို မူးယစ်ဆေးနဲ့ လိင်ကိစ္စကြား ဘယ်လို ရောက်သွားတယ် ဆိုတာတွေ ပါဝင်ပြီး ၊ အောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို ဒီကားမှာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တုန်းက ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ adult flim အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ၊ Jonas Middleton ကရိုက်ကူးပေးထားပါတယ် ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ များစွာသော အသစ် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေ ပါဝင်ပြီး ၊ ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးပါ။
Pink Flamingos ဇာတ်ကားဟာ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တုန်းက ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဟာသကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ John Waters က ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းရေး ၊ ထုတ်လုပ် ၊ တည်းဖြတ် ၊ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ ။ ဒီဇာတ်ကား စတင်ဖြန့်ဝေတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အငြင်းပွားမှုတွေ များစွာ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ၊ အဲ့ခေတ်ကတော့ လုံးဝ ပေါက်ကားတစ်ကားပါ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၁၉၇၄ ခုနှစ်က ယူဂိုးဆလားဗီးယား ဒါရိုက်တာ Dušan Makavejev ရဲ. ဟာသဒရာမာ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ၊ ကနေဒီယန်း အလှဘုရင်မက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားက ထူးထူးခြားခြား အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ ။ ဘင်္ဂလီဒါရိုက်တာ Qaushiq Mukherjeeက ရိုက်ကူးထားပြီး ၊ ဘာသာစကား ၊ နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြောင့် အငြင်းပွားစရာတွေ များစွာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။